ओपो एफनाइनको मूल्य घट्यो, अब कतिमा पाइन्छ ?
काठमाण्डौ । वैश्विक रुपमै अग्रणी स्मार्टफोन ब्राण्ड ओपोले नेपाली उपभोक्ताका लागि ओपो एफनाइनको मूल्य समायोजनको घोषणा गरेको छ । ओपोले भोक प्रविधि सुसज्जित एफनाइन (४जीबी भ्यारिण्ट)लाई नयाँ आकर्षक समायोजित मूल्यमा उपलब्ध गराएको हो । ओपोलाई नेपालमा विश्वसनिय ब्राण्डका रुपमा स्थापित गर्न उपभोक्ताद्वारा प्राप्त माया र सहयोग प्रति...
ओपो एफनाइन जेड ग्रिन बजारमाः मूल्य रु. ४१५९०, पाँच मिनेट चार्जमा २ घण्टा टकटाइम
काठमाण्डौ । सेल्फी एक्स्पर्ट एण्ड लिडर ओपोले वैश्विक स्तरमै निकै लोकप्रियता कमाएको स्मार्टफोन ओपो एफनाइन अन्तर्गत नयाँ लिमिटेड एडिशन सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो बर्ष सनराइज रेड, ट्वाइलाइट ब्ल्यू र स्टारी पर्पल गरी तीन भिन्न रंगमा सार्वजनिक ओपो एफ नाइनका लागि प्राप्त अभूतपूर्व सफलतापश्चात कम्पनीले नयाँ रंग जेड ग्रिनमा लिमिटेड...
काठमाण्डौ । बजार अनुसन्धान फर्म काउण्टरपोइण्टले ओपोलाई लोवर प्रिमियम सेग्मेण्टमा स्मार्टफोन ब्राण्ड मध्यकै अग्रणी घोषित गरेको छ । संतृप्त बजार र ब्यापक प्रतिस्पर्धा बीच ओपोले पाइरहेको सफलतालाई नतिजाले प्रमाणित गरिदिएको दाबी गरिएको छ । घरेलु बजार चीनबाट मात्रै ९५ प्रतिशत फ्ल्यागशिप सेल्स प्राप्त गरेको ओपोसंग थप आकर्षक...
ओपो एफ नाइन नेपालमा, ५मिनेट चार्ज गर्दा २ घण्टासम्म कुरा गर्न सकिने
काठमाण्डौ । सेल्फी एक्स्पर्ट एण्ड लिडर, ओपोले आफ्नो लोकप्रिय एफ सिरिज अन्तर्गत नयाँ उत्पादन, ओपो एफ नाइन सार्वजनिक गरेको छ । मात्र ५ मिनेट चार्ज गर्दा २ घण्टाको टकटाइम दिने, भोक फ्ल्याशचार्जिङ र उद्योगकै पहिलो ग्राडियण्ट कलर डिजाइनसहित सार्वजनिक गरिएको नयाँ एफ नाइनमार्फत कम्पनीले ओपोको अत्याधुनिक प्रविधि र नव प्रबद्र्धनात्मक...
काठमाण्डौ । सेल्फी एक्स्पर्ट, ओपोले नेपाली बजारमा नयाँ मिड–रेञ्ज स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले सुपर फुल नोच स्क्रिन सहित ६.२ ईञ्च स्क्रिन भएको एथ्रीएस सार्वजनिक गर्न लागेको हो । कम्पनीको मिड–टायर स्मार्टफोन भएता पनि यसमा डुअल क्यामेरा सेटअप, नोच सहितको सुपर फुल स्क्रिन डिस्प्लेका साथै ८८.८ प्रतिशत...
ब्राजिलियन फूटबलर नेयमारसँग ओपोको सहकार्य घोषणा
काठमाण्डौ । सेल्फी एक्स्पर्ट एण्ड लिडरका रुपमा परिचित ओपोले विश्वमै सर्वाधिक लोकप्रिय ब्राजिलियन फूटबलर नेयमारसँग ओपो फ्रेण्डका रुपमा सहकार्यको घोषणा गरेको छ । यसअघि पनि ओपोले आफ्नो एफसी बार्सिलोना एडिशनको प्रबद्र्धनका लागि नेयमारसंग सहकार्य गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । यस सहकार्यसंगै कन्टेष्ट अवधिभर नेयमारलाई ओपो...
ओपोलाई ईन–डिस्प्ले फिंगरप्रिण्ट सेन्सर प्याटेन्ट
काठमाण्डौ । ओपोलाई ईन–डिस्प्ले फिंगरप्रिण्ट स्क्यानरका लागि प्याटेन्ट प्रदान गरिएको छ । द स्टेट ईन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी अफिस अफ चाइना (एसआईपीओ)ले कम्पनीलाई उक्त प्याटेन्ट प्रदान गरेको हो । प्याटेन्ट फाइलिङका दौरान देखापरेका तस्विर नियाल्दा स्क्यानरले फोनको तल्लो बेजल भन्दा माथि ठूलै स्थान ओगट्ने देखिन्छ । तस्विर नियाल्दा...
ओपोबाट स्मार्टसेल्फी र तीव्र प्रदर्शनीका लागि ए८३–२०१८ सार्वजनिक
काठमाण्डौ । सेल्फी एक्स्पर्ट एण्ड लिडर, ओपोले नयाँ एन्ट्रि–लेभल क्यामेरा फोन ओपो ए८३ २०१८ सार्वजनिक गरेको छ । ए ८३-२०१८ यसै वर्षको जनवरी महिनामा सार्वजनिक गरिएको लोकप्रिय ओपो ए८३को परिस्कृत भर्जन हो । तीव्र गतिमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादनका लागि ओपो ए ८३-२०१८मा कम्पनीले ४ जीबी र्याम र ६४ जीबी रोमको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, यूवा...
नेपालमा ओपो एफ सेवेनको फ्रस्ट सेल आरम्भ, तहल्का मच्चाउने कम्पनीको दाबी
काठमाण्डौ । सेल्फी एक्स्पर्ट एण्ड लिडर, ओपोले नेपालमा आफ्नो बहुप्रतिक्षित मोडल ओपो एफसेवेनको अप्रिल २५ देखि फस्र्टसेल मार्फत बिक्री आरम्भ गरेको छ । ओपो एफसेवेन एआई ब्यूटी टेक्नोलोजी २.० र २५ एमपी फ्रण्ट क्यामेरा सहितको नेपालमा ब्राण्डकै पहिलो एफएचडी प्लस सुपर फुल स्क्रिन डिस्प्ले मोडल हो । सेल्फीमा रहेका विषयहरुका लागि...
ओपोको एफसेवेनको भव्य लञ्च, आकर्षक विशेषता
काठमाण्डौ । सेल्फी एक्स्पर्ट एण्ड लिडर ओपोले नेपालमा एफसेवेन सार्वजनिक गरेको छ । आर्टिफिसियल ईन्टेलिजेन्सी (एआई) सहितको नयाँ सेल्फी एक्स्पर्टले स्मार्टफोन प्रविधिलाई नयाँ उचाई प्रदान गर्ने कम्पनीको दाबी छ । सेल्फी फोटोग्राफीका लागि एफसेवेनले परिस्कृत एआई प्रविधि लगायत एआईमा आधारित अन्य वैकल्पिक फिचर्सको उपयोग गर्छ । सुपर...
ओपोको यू एण्ड आई क्याम्पेन सार्वजनिक हुँदै, स्टारसँग सेल्फी खिच्ने अवसर
काठमाण्डौ । ओपोले नेपाली बजारमा चाँडै नै ओपो एफ सेवेन सार्वजनिक गर्दैछ । सेल्फी एक्स्पर्ट सिरिजमा आर्टिफिसियल ईन्टेलिजेन्सी(एआई) प्रविधि समाहित गरिएको ओपो एफ सेवेन नयाँ सदस्यका रुपमा कम्पनीले सार्वजनिक गर्न लागेको हो । नयाँ सेल्फी एक्स्पर्टको सार्वजनिकका लागि आयोजित हुने बृहत समारोहलाई अझ रोचक बनाउने उद्देश्यका साथ कम्पनीले...
ओपोको एफ सेभेन सार्वजनिक गर्ने तयारी, मोवाइल उद्योगमा तहल्का मच्चाउने विश्वास
काठमाण्डौ । सेल्फी एक्स्पर्ट एण्ड लिडर, ओपोले आफ्नो सेल्फी एक्स्पर्ट सिरिजमा आर्टिफिसियल ईन्टेलिजेन्सी (एआई) सुविधा सहितको नयाँ स्मार्टफोन एफसेवेन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। नवप्रबद्र्धनात्मक प्रविधिमा केन्द्रित नयाँ ओपो एफसेवेनमा नेपाली यूवा माझ रहेको सेल्फी एक्स्पर्ट एण्ड लिडरको छवि अझ सुदृढ बनाउन अन्य अत्याधुनिक...
ओपो ए७१ को नयाँ भ्यारियण्ट नेपाली बजारमा आउँदै, दुई रंगमा उपलब्ध हुने
काठमाण्डौ । सेल्फी एक्स्पर्ट एण्ड लिडर ओपोले आफ्नो ए सिरिजको पोर्टफोलियोमा नयाँ उत्पादन थप गर्ने तयारी गरेको छ । ओपोले चाँडै नै नेपाली बजारमा ओपो ए७१(२०१८) सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको हो । परिस्कृत एआई ब्यूटी प्रविधि र शक्तिशाली क्वालकम स्न्यापड्र्यागन ४५० प्रोशेसर सहितको ए७१(२०१८)को फ्रण्ट क्यामेरामा ओपोको कोर सेल्फी प्रविधि...
दक्षिणपूर्वी एशियामा ओपोको दोश्रो स्थान कायम
काठमाण्डौ । मार्केट रिसर्च फर्म ईन्टरनेशनल डाटा कर्पोरेशन (आईडीसी)द्वारा प्रकाशित ताजा रिपोर्र्टका अनुसार सन् २०१७ मा २९ प्रतिशतको ‘डबल डिजिट’ बृद्धिदर दर्ता गर्दै दक्षिण पूर्वी एसियाली क्षेत्रमा बार्षिक स्मार्टफोन शिपमेन्ट्सका आधारमा ओपोले दोस्रो स्थान सुनिश्चित गर्न सफल भएको छ । ‘क्वाटर्ली मोबाइल फोन ट्र्याकर’मा...
ओपोको ड्याशिङ ब्ल्यू लिमिटेड एडिशन सार्वजनिक
काठमाण्डौ । सेल्फी एक्सपर्ट एण्ड लिडर, ओपोले नेपाली उपभोक्ताका लागि ओपो एफफाइभको ड्यासिङ ब्ल्यू लिमिटेड एडिशन सार्वजनिक गरेको छ । आकर्षक नीलो रंगमा सार्वजनिक यो फोनले एफ फाइभको लोकप्रियतालाई थप उचाईँ प्रदान गर्ने कम्पनीको विश्वास छ । लिमिटेड एडिशनका रुपमा मूल्य रु. ३६ हजार ४ सय ९० निर्धारण गरिएको नयाँ फोन कम्पनीको नेपालभरका अफलाइन...